Zentangles: Zvavari Uye Maitiro Ekuita Ako Oga - Blog
Zentangles: Zvavari Uye Maitiro Ekuita Ako Oga
Mabhuku evakuru ekuisa mavara atora nyika nedutu mumakore mashoma apfuura, uye nechikonzero chakanaka!
Kufunga kuti yakawanda sei kunetseka munhu wepakati anobata zuva nezuva - nebasa, chikoro, hukama, kurera, uye zvakajairika 'kukura' - zvinoshamisira kuwana yakapusa yekuyedza yekuyedza inounza mufaro wakanyanya nerunyararo.
Kana iwe uri mumwe wevanhu ivavo vanowana kunakidzwa nekuzvirasa pachedu pakara iwo mabhuku epateni, saka Zentangles inogona kunge iri yako inotevera yekugadzira obsession.
Panzvimbo pekungozadza mifananidzo yemumwe munhu nemuvara, iwe une mukana wekudhirowa yako wega!
Chii chinonzi Zentangles?
Muchidimbu, Zentangles mhando ye 'doodle art.' Yakagadzirwa nekudzokorora kana kurongeka mapatani uye machira, ivo wedzera kutarisa kwako uku uchikwiridzira kugona kwako kwekugadzira.
Maria Thomas, calligrapher, uye mumwe wake Rick Roberts, vakagadzira iyo yepamutemo Zentangle® Method pamwechete.
Rick akacherekedza kuti Maria aizoita zvisina basa mapatani paakange achishanda pachidimbu, ndokumubvunza nezvavo.
Akapindura kuti aizozvirasa mumifananidzo iyi, ndokunzwa pfungwa ye 'rusununguko, kugara zvakanaka, uye kutarisa kwakazara' achidaro.
Kubva yavo webhusaiti :
Maria akarondedzera manzwiro ekuzvipira, kushaya nguva, kushaya simba uye kunyudzwa kwakapfuma mune izvo zvaaiita - ese echinyakare maficha ekuyerera kwenyika.
ndodanana here gore rino
Mushure mekudzidza kufungisisa kwemakore, Rick akaziva ichi senzira yekufungisisa kunyudza, uye pamwe chete, vaviri vacho vakagadzira nzira yekubatsira vamwe vanhu kuti vawane pfungwa yakafanana yekudzikama nerunyararo ivo vachigadzira avo akanaka mabasa ehunyanzvi.
Ivo Vanotora Yakareba Nguva Yekuita?
Vanogona kutora yakareba kana senguva shoma sezvaungade.
Vamwe vanhu vanosarudza kushanda pamataira madiki (akaita 3 × 3 inches mativi) kuitira kuti vasanyanye kutya nechikero, uye vanogona kupedzisa Zentangle mukugara kamwe chete.
Iyo pfungwa yekuita inogutsa kwazvo, uye mataera mazhinji anogona kurongedzwa pamwechete kugadzira mufananidzo muhombe, kana zvichidikanwa.
Vamwe vanofarira kugadzira zvidimbu zvakakura zvinotora mazuva kana vhiki kuti zvipedziswe. Zvinoenderana nezvamunoda iwe pachako.
Saizvozvowo, zviri kwauri kuti iwe unogadzira monochromatic mifananidzo, kana kana iwe ukaipenda mukati nemapenzura ane mavara kana mamaki gare gare.
Ndezvipi Zvakanakira Kugadzira Zentangles?
Vanhu vanowanzojairira kuita zvakawanda zvekuti havazive kuti runyararo rungawanikwe sei nekunyudzwa mune rimwechete, rekugadzira basa.
Iwo madhirowa anoshanduka nenzira yechisikigo, zvemuviri, saka hapana kunetsekana nezve kuisirwa kwepateni, zvikamu zvenguva dzose, nezvimwe. Izvo zvese kungoyerera kwemahara, chero kwaunosvikira mamuseum
Pamusoro pekudzikama kunogona kuwanikwa nekuvapo zvachose, vanhu vazhinji vakave nenguva dzekujeka kana dzakasiyana epiphanies pavanenge vachigadzira.
Kana pfungwa dziine nguva shomashoma yekudzikama uye kuvapo mune yekugadzira, kushushikana kwese nekushushikana kwehupenyu hwezuva nezuva kunyarara zvishoma, zvichibvumira iyo subconscious kutaura.
Vamwe vanhu vanoda maZentangles avanogadzira zvekuti vanoaisa furemu nekuvasungirira pamadhesiki avo kubasa, kana kune dzimwe nzvimbo kwavanozoonekwa nguva zhinji. Kungotarisa iyo pateni iyo yakasikwa mune yekudzikama kazhinji inogona kudzosa iko kunzwa.
Bvarura Kutenderera Kwepfungwa Dzokororo NeKudzorerazve Pfungwa Dzako Sezvizvi
8 Nzira dzekubatana zvakare neMwana Wako Mukati (Uye Nei Uchizoda)
Ndezvipi Zvishandiso Zvandinoda?
Iwe unogona kurodha pasi Zentangle template pamhepo (senge imwe yeayo atakakusikira - ona pazasi), kana gadzira yako wega.
Tinokurudzira kutanga netemplate kuti iwe ugone kujairira iko kuita, uyezve unogona kugadzira zvako, mune chero mafomu aunoda.
Iwe unozodawo zvinyoreso, penzura, mamaki, kana chero imwe svikiro yaungade kushanda nayo.
Zvinokurudzirwa kuti iwe uedze zvakati wandei zvekunyora kana zvekushandisa zvekushandisa kuti uone kuti ndedzipi dzaunoda zvakanyanya.
Technical peni senge Micron kana Staedtler zvakanaka, uye iwe unogona zvakare kuyedza bhurashi mamaki , calligraphy pens… chero chinhu chinoenda, chaizvo.
Saka, kune yekutarisa:
Pepa (kana zvimwe akagadzirira-kushandisa-mazita evanyori )
Zvinyoreso, mapenzura, mamaki
Chikamu chenguva iyo iwe chaunogona kunyudza zvakasununguka mune ino yekugadzira yekuedza
Ko Kana Ndikakanganisa?
Iwe haugone! Ndihwo runako rweizvi zvidimbu zveunyanzvi: hapana chinhu chakadai sekuita chimwe chinhu chisina kunaka.
Iko hakuna mitemo, ingori nhungamiro iwe yaunogona kutevedzera, kana zvichidikanwa kudaro.
Vamwe vanhu vanotyisidzirwa nechinhu chero chipi zvacho chine chekuita nekudhirowa, nekuti vanogona kunge vasina chivimbo chakanyanya muhunyanzvi hwavo hwekudhirowa.
Ndapota, ndapota usarega izvi zvichikutyisidzira kana kukukanganisa.
Zentangles anoitirwa kuve asingabvumirwe doodles ayo anotendera iwe kuti uongorore kufunga uye kugona. Chero ani zvake anogona kuzviita. Ivo vanongodzokororwa mapatani, magadzirirwo, uye mitsetse inoyerera iyo inosangana pamwechete kugadzira akanaka mabasa ehunyanzvi.
Iwo humbowo hwekuti chero munhu anogona kuve muartist: iwe unofanirwa kungoita yako intuitive, zvakasikwa zvisikwa zviuye nenzira yako wega, pasina zvinotarisirwa, mitemo, kana kutonga kwevamwe vanhu.
Ini Handifarire Zvandakagadzira. Ndingazviitisa Here?
Zvakanaka, hongu unogona.
Sezvambotaurwa pamusoro apa, hapana chakadai sekukanganisa: chete mikana yekudzidza uye kukura.
Iwe haufarire zvakaitwa neimwe Zentangle? Zvakanaka, tora kanguva uzvibvunze zvausina kufarira nezvazvo, uyezve nezvawakaita nezvazvo.
chii chaunowana mune mukomana
Uyu ndiwo mukana wako wekuona kana iwe uchida mamwe ejometri kana ehupenyu mafomu mumadhirowa ako.
Unosarudza makona akapinza here? Kana mitsara yemvura?
Iwe unofarira kushanda netemplate, kana kurega yako wega yekugadzira whims inotungamira maoko ako?
Iwe unofarira kuve nyore kwe2D here? Kana iwe unoda kuwedzera shading?
Aya madiki canvases akagadzirwa kuti iwe uongorore kugona kwako, uye mikana yacho haigumi, kutendeseka.
Edza kusazvibvumira iwe pachako kumanikidzwa nechiratidzo chezvaungade kuti Zentangle yako ipedze se.
Iyo poindi yese yeaya madhirowa haisiri iwo mugumo mhedzisiro, asi asi iyo yekugadzira maitiro: chiitiko icho chaicho.
Kuve wakanyudzwa zvakazara munguva , kurega kushushikana uye kushungurudzika kuchidonha paunenge uchigadzira chimwe chinhu chakanaka.
Iwe Uri Artist
Vanhu vese vanozvarwa vaine hunyanzvi, asi vazhinji vanorasikirwa nerudo rwavo rwekugadzira pakutanga kwehupenyu.
Izvi zvinogona kuitika muhucheche, muchikoro chesekondari, kana chaizvo panguva ipi neipi nenguva, uye zvinowanzo rova ​​kana paine kushoropodza kamwe kamwe nezvehunyanzvi hwemunhu.
Uku kutsoropodza kunogona kubva kune vezera, mubereki, mudzidzisi, kana kunyangwe zvake kutaura kwakashata nekushungurudzika.
Kamwe kamwe, chero mhando yehunyanzvi inosanganiswa ne kutya kukundikana uye / kana kurambwa , uye saka nzvimbo yakanaka iyi yakadzikiswa.
Zentangles inzira yakasarudzika yekudzorerazve rako rekusika. Iko hakuna tarisiro, kunyangwe kana madhiri!
Unogona kutenderera mataira kutenderedza paunenge uchidhonza (ndiyo iri nyore nzira yekudhirowa mapatani), uye kunyangwe iwo madhairekitori mune anodhindwa matemplate ingori mazano.
Uku kutamba kwekugadzira pane kwayo kwakachena uye kunonakidza kwazvo. Ngatipindei mukati, handiti?
Kuti ikubatsire iwe munzira yako, heino vhidhiyo ini yandakarekodha kwandinotaura zvishoma nezve nzira yekugadzira Zentangle ( tinya pano kuvhura muYouTube):
Dzvanya apa uye apa kune akati wandei epamusoro-res mapikicha emhedzisiro mhedzisiro kukukurudzira iwe uye kukupa iwe mamwe mazano emapateni iwe aunogona kuyedza.
Uye sezvambotaurwa, isu takagadzira akati wandei matemplate kuti iwe utore uye uprinte kunze kuti ushandise senzvimbo yekutangira yako wega Zentangle maitiro.
Izvi ndizvo zvinoita sevamwe vavo.
Dzvanya iyi link kuti udaunure sePDF iwe yaunogona kuprinda (hapana chiratidzo chinodiwa!)
Unogamuchirwa kushandisa izvi, kana zvisina kudaro ingopinda mukati uye ugadzire yako wega!
ndingaenda kupi nemukomana wangu kubhavhadhe rake
matauriro andingaita kana wangu ex musikana arikundida kudzoka
izvo zvinonzi kubiridzira mumwe munhu
ndeapi mazwi matatu anokutsanangudza